Izindaba - Kungani ukhetha ibhodlela le-plastic spray?
Emakethe yezinto zokupakisha, noma kunjalo ibhodlela le-cosmeticizinto zokupakisha zihlukene, amabhodlela epulasitiki wokuphrinta angukukhetha kokuqala kwamakhasimende ukukhetha amabhodlela okufafaza. Kungani amakhasimende ethanda amabhodlela epulasitiki uma ekhetha amabhodlela okufafaza? Ngobaamabhodlela okupulasitiki ube nezinzuzo ezilandelayo kumakhasimende:
1. Izinto zepulasitiki, zilula futhi zilula ukuphatha;
2. Uma kuqhathaniswa namabhodlela engilazi nensimbi, amabhodlela okupulasitiki kulula ukwakha nokwenza imikhiqizo amakhasimende ayidinga kalula;
3. Izindleko ziphansi ngokuqhathaniswa nezinye izinto, futhi ibanga lokupakisha alilahlekile;
4. Uma kuqhathaniswa nezinye izinto zokwakha, isifutho sizoba ntekenteke ngokwengeziwe. Njengoba ipulasitiki uqobo luthambile, umzimba webhodlela uzoncipha kancane uma ufafaza, kwakheke amandla okubiyela, okwenza isifutho sibe buthakathaka futhi sibe side;
5. Kuthambekele kakhulu ekuvuzeni. Ikhanda lepompo livame ukwenziwa ngezinto zepulasitiki, futhi isakhiwo esivundayo phakathi kwepulasitiki nepulasitiki sivalwe ngokuqinile futhi siqinile, sivale umoya ngokuqinile, futhi mancane amathuba okuthi kuvuze. Ukuqina komoya kwepulasitiki nezinye izinto kuncane kakhulu, kanti ezinye izinto zinosilika futhi kunzima ukuziqinisa;
6. Ukusebenza kwezindleko eziphezulu. Amabhodlela e-plastic spray bulala ezinye izinto ngokusebenza kwezindleko.
I-Shanghai Rainbow Industrial Co, Ltd ingumkhiqizi, iphakethe le-rainbow lase-Shanghai Nikeza ukupakisha kokuma okukodwa.Uma uthanda imikhiqizo yethu, ungaxhumana nathi,
Isikhathi Iposi: Aug-18-2021